Ogaden News Agency (ONA) – Weerar xoogan oo lagu qaaday Kaam-Daawadiid oo cadawga lagu jabiyay
Weerar xoogan oo lagu qaaday Kaam-Daawadiid oo cadawga lagu jabiyay
Posted by ONA Admin	/ March 1, 2013
Wararka naga soo gaadhay wadanka Ogaadeeniya gaar ahaan Xarunt Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaalo ka dhacay deegaano kamid ah Dalka Ogaadeenia dagaaladaasi oo khasaare xoogan loogu gaystay askarta gumaysiga Ethiopia ee dulmiga ku jooga Ogaadeniya.
22/02/2013 Weerar xoogan oo ay cutub katirsan NH/CWXO ku qaadeen Askarta gumaysiga Ethiopia oo lagu soo uruuriyey Deegaanka lagu magacaabo Kaam- Daawadiid oo katirsan Dagamda Dhuxun ayaa waxaa weerarkaasi Askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 25 Askari waxaan lagaga dhaawacay 30 kale.
23/2/2013 Dagaal ka dhacay Deegaanka Lafweyn oo ka tirsan Xarunta gobolka Qoraxay ee magaalada Qabridahar ayaa waxaa Askarta daalan ee gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 5 Askari waxaana lagaga dhaawcay 7 kale.
Waxaa iyaguna jira dagaalo kale oo ka kala dhacay 24 iyo 24kii bishii labaad Deegaanada kala ah Maraacaato,Warta-kadaad iyo Quutul oo dhammaantood Qabaridahar kawada tirsan waxaan dagaaladaas askarta gumaysiga Ethiopia loogu gaystay khasaare xoogan oo faahfaahintiisa aanan helin.
Taliska gabalkiisu sii dhacayo ee wayaanaha ayaa waxaa caado u ah marka askartooda lagaga adkaado goobaha dagaalka ay iskaga horyimhaadaan NH/CWXO inay kula kacaan falal fulaynimo ah oo aar goosiya dadka shacaka ah ee aan iska difaaci Karin, waxayna u gaystaan tacadiyo ay kamid tahay Dil. Waxay 20/02/2013 ku dileen magaalada Xamaro nin shacab ah oo lagu magacaabi jiray allaha unaxariistee;
Dhuux Badal Cawl
24/02/2013 Magaalada Gunagado ee Gobolka jararna waxay askarta gumaysiga Ethiopia ku dileen isna alla unaxariistee nin lagu magacaabi jiray
Rabiic Sheekh Cabdi Xandule.